အသက် ၂၆ - ပထမတော့မင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၆ - ပထမတော့မင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်။
၁၀။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး
ကျွန်တော်ဟာသာမန်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုပဲ၊ ကျွန်မဟာအသက် ၂၀ ကျော်လာတဲ့သူတွေလိုပဲ။ ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ porn ကတော့ကျော်ကြားတဲ့ kink.com က BDSM porn ပဲ။ ရိုက်ကူးနေတုန်းမိန်းကလေးကဇောက်ထိုးဆိုင်းထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုမရေမတွက်နိုင်သောအဝတ်အထည်များချိတ်ဆွဲထားစဉ်မှာသူမရဲ့ pussy ထဲကို dildo တစ်ကောင် ၀ င်လာသည်ကိုကျွန်မလိင်တံခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးကထူးဆန်းတဲ့နည်းတွေနဲ့ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်အိမ်ကလှောင်ပြောင်တာကိုတွေ့တော့ငါအရမ်းမြင့်သွားတယ်။ အချို့လူများကကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သဘာဝကျကျလက်အောက်ခံသူတစ် ဦး အနေနှင့်အများဆုံးခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအိပ်ရာပေါ်တင်ပြီး ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံမှထွက်လာသည့်အရာတစ်ခုခုကိုခံစားမိချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆီးမျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်၎င်းသည်သုက်ပိုးဖြစ်သည်ကိုမသိပါ။ ဒီခံစားချက်ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါဒီလိုခံစားမှုစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုမတိုင်ခင်ငါ့ရဲ့မိဘတွေကအိမ်မှာမရှိတဲ့နောက်ရက်တွေမှာအကြိမ်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ငါအများအားဖြင့် BDSM ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၂ ကြိမ်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အလိုဆန္ဒများနှင့်ဆန္ဒများသည်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သောအခါသတ္တုတွင်း၏အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းသည်တစ်နေ့လျှင်ငါးကြိမ်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ ၂၄/၇ နီးပါးကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲလမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကငါ့ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ်။ ငါပညာရှင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ခွင်၌ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲသည်, ငါ့ Self- လေးစားမှုနိမ့်သည်နှင့်ငါ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။ ငါကနုတ်ထွက်ချင်တယ်။ ငါ့ဘ ၀ ကိုလုံး ၀ ပြောင်းလဲစေချင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူး။ ငါ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းတစ်ရက်လုံးလုံးကြာနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ပြင်းထန်သောတွန်းအားကြောင့်ရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာတဝှမ်းမှလူများနှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တူညီသောပြproblemနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ဒီ NoFap ပလက်ဖောင်းထဲကို ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် NoFap ကြောင့်သူတို့ဘဝဟာအဲဒီအချိန်ကစပြီးသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ငါဖိုရမ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသားများအဖြစ်သို့အောင်မြင်စွာအသွင်ပြောင်းခဲ့သောအခြားသူများထံမှသင်ယူခဲ့သည်။ ငါအရမ်းသဘောကျသွားပြီး PMO ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းငါ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါသည်ဤ NoFap ခရီး5ကြိမ်များအတွက်ပါပြီ။ ငါကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချမှတ်ခြင်းဖြင့် PMO မှထွက်ရန်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် ၁၀ ရက်မျှသာဖြစ်သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးကြိုးပမ်းမှုအဘို့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်မြင့်မားမျှော်လင့်ထားမသတ်မှတ်ခဲ့ 10 နှစ်ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အလေ့အထကိုသိကဲ့သို့သောဖယ်ရှားပစ်ရန်မလွယ်ကူကြောင်း, ထိုသို့စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ဇွဲအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ငါသိ၏။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၉ ရက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကန ဦး ရည်မှန်းချက်မှာ ၁ ရက်မပြည့်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအလွန်အရေးပါသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်အတော်လေးကျေနပ်မှုခံစားခဲ့ရသည်။
ပြန်လည်ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး NoFap အတွက်ဒုတိယကြိုးစားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထခဲ့တယ်။ ဒီပတ်ပတ်လည်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက် ၂၀ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ၁၄ ရက်ပဲကြာတယ်၊ ၂ ပတ်နဲ့ညီမျှတယ်၊ အရင်ကလုပ်ခဲ့တာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ၅ ရက်အနည်းငယ်တိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ရက်ပေါင်း ၂၀ ရည်မှန်းချက်ကို ၆ ရက်လျှော့ချခဲ့ပေမယ့်ဒီကြိုးပမ်းမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောခရီးအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုအချို့ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးတို့ကဲ့သို့ပြီးသားမြင်တွေ့ရသောကြောင့်
ကျွန်မခရီးစဉ်တွေကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲရပ်တန့်မသွားခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ကြိုးစားမှုနှစ်ခုလုံးကပစ်မှတ်ကိုတကယ်မထိခဲ့ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးနှင့်ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုအတွက်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် PMO ကိုလုပ်သည်၊ သို့သော်ကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖိုရမ်မှရရှိသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကြံဥာဏ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက် NoFap ကြိုးပမ်းမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးဤတစ်ကြိမ်တွင်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရက် (၂၀) ​​ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလည်းချမှတ်ခဲ့သည်။ ငါရက်ပေါင်း ၂၀ ထိနိုင်ခဲ့ပြီးရက် ၂၀ အတွင်းထပ်မံထည့်နိုင်ခဲ့ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ရက် ၄၀ သို့ရောက်ရန်ထပ်မံကြိုးစားနိုင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲရပ်ပြီးနောက်အရက် ၂၀ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က ၇ ရက်ကြာမှ ၄၇ ရက်မှာပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ ငါ PMO မပါဘဲ ၄၇ ရက်အထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးသွားလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏တတိယကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအရာများနှင့်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခဲ့သည်။ ပထမ ၂၀ ရက်သည်ငရဲကဲ့သို့ခက်ခဲကြောင်းဖော်ပြရန်မလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲမက်နေခဲ့သော်လည်းကံအားလျော်စွာကျွန်ုပ်အားလုံးအားလုံးကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါရက်ပေါင်း3အခြေခံစံနှုန်းလွန်ပြီးနောက်ခရီးအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူလာတယ်နှင့်ငါ့အလုပ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ငါ့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးတိုးတက်လာသည်ဟုခံစားရတယ်အကယ်စင်စစ် ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်ပြည့်ဝပြီးကျွန်မရဲ့အစာစားချင်စိတ်ဟာအရမ်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ငါမတော်တဆသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီပို့လိုက်တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့လင့်ခ်ကိုနှိပ်မိလိုက်ပြီးကလစ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြစ်မှန်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ cumshot သည်အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်အော်ဂဇင်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိသောအကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်ဖြစ်သကဲ့သို့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်မ ၄၇ ရက်အထိရောက်ပြီးကတည်းကဆက်မနေနိုင်တော့လို့အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်များကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၊ ကဏ္Fများစွာတွင် NoFap ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူမိသည်။ ဒီ ၄၇ ရက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့တာလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်၊ ဥပမာ - အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာအလုပ်များနေဖို့၊ စာအုပ်ဖတ်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာစသဖြင့်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၄၇ ရက်ဟာကျွန်မအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
၄၇ ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာပြီးနောက်ငါ PMO ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်လာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရင်ကလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါ့ကိုစတုတ္ထကြိုးပမ်းမှုဆီသို့တွန်းပို့လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများအရ ၄၇ ရက်ထက် ကျော်လွန်၍ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၆၀ အထိသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရဤပတ်ပတ်လည်၌မည်သည့်ပစ်မှတ်ကိုမျှမချမှတ်ခဲ့ပါ။ ငါလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့တူညီသောနည်းစနစ်များကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒရာမာမပါဘဲရက်ပေါင်း ၃၀ ကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသောအခါအားလုံးအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၃၂ ရက်မြောက်နေ့မှာညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ဖို့၊ ရုတ်တရက်ပြန်ကြည့်ဖို့ရုတ်တရက်တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်အလွယ်တကူရိုက်နှက်ခံရတာကိုငါခံခဲ့ရတယ်။ ငါ cum ကိုကြည့်ပြီးအရမ်းနာကျင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းဒေါသထွက်ပြီးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်မိတယ်။ ငါလုပ်နိုင်တာထက်အများကြီးပိုဆိုးတာကိုလုပ်မိလို့မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စွာခံစားရတယ်။ ငါမှောင်မိုက်ကိုသာမြင် ခဲ့၍ မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတီးပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ နေ့ ၃၂ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်ကိုယ်ရေတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကိုပုံမှန်ကျေနပ်မှုမရှိတော့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ခြားလိင်မှုကိစ္စများကိုပင်ကြည့်ရှုခဲ့သည်မှာတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချိန်ကိုကုန်လွန်စေသည်။ ငါ NoFap ကထွက်ပြီးအဲဒီအချိန်ကတည်းကဖိုရမ်ကိုမဖတ်တော့ဘူး။
အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြေးပွဲမှာ ၂ လခန့်ကြာခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှထိုအရာအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ် NoFap ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်မိသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားစေတယ်။ ငါအစပျိုးခြင်းနှင့် PMO ကိုရပ်တန့်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုနောက်တဖန်ငါ့ထံသို့ပြန်လာ၏။ ငါအရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်သတိရလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ငါ့ရဲ့မြည်းကို NoFap ခရီးကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါဟာငါ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်ဆိုးဆိုးရွားရွားလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုလိုချင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါဟာငါ့ကိုအခုထိတည်ရှိခဲ့တဲ့ NoFap ရဲ့ ၅ ကြိမ်မြောက်ကြိုးပမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခဲ့တယ်။
ဒီ ၅ ကြိမ်မြောက်ကြိုးစားမှုကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တယ်၊ ၄၇ ရက်ပတ်လုံးဖြတ်ပြီးငါ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့မည်သည့်အရာမှမထိခိုက်ဘဲငါတတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ ၃၄ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​ကြိမ်မြောက်ကြိုးပမ်းမှုကိုကျော်လွန်ပြီး ၃၂ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏တတိယမြောက်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သော ၄၇ ရက်အကောင်းဆုံးအရောင်းမှ ၁၃ ရက်သာကျွန်ုပ်သည်ရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းရောပါကျန်းမာသန်စွမ်းလာတာနဲ့အမျှအခုချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ တခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးဟာတိုးတက်လာပြီးဒီခရီးမှာသူငယ်ချင်းအသစ်တွေရလာတယ်။ NoFap ဖိုရမ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထပ်မံထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာမှလှုံ့ဆော်မှုအချို့ရရှိရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုန်းကန်နေရသောသူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှရန်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ရပ်တန့်ရန်မည်သည့်လက္ခဏာမျှမတွေ့ရပါ။ ငါပြန်သွားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘယ်သူမျှမဆင်ခြေပေး။ ငါဒီပတ်ပတ်လည်ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာတင်းကျပ်စွာပြုနေခြင်းကြောင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းမရပ်နိုင်ပါ။ အဲ့ဒီလှုံ့ဆော်မှုတွေရောက်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးပြောတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်ပုတ်တယ်။ ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအားလုံးနဲ့အတူအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၆၀ အထိသွားနိုင်မယ်လို့ငါတကယ်မျှော်လင့်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအစဉ်အမြဲစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ NoFap ခရီးကိုပြန်လည်ရယူရန်။
ပထမခရီး - ၉ ရက်
ဒုတိယခရီး - ၁၄ ရက်
တတိယခရီး - ၄၇ ရက် (အကောင်းဆုံးလမ်း)
၄ ကြိမ်မြောက်ခရီး - ၃၂ ရက် (တတိယအကောင်းဆုံး)
ပဉ္စမမြောက်ခရီး - လက်ရှိ ၃၄ ရက်နှင့်ရေတွက်နေဆဲ (ယခုအချိန်တွင်ဒုတိယအကောင်းဆုံး)
ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ! သင်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြန်သွားသည်ကိုကြောက်စရာမလိုပါ။ အရေးအကြီးဆုံးမှာသင်မအောင်မြင်သည့်နေရာမှပြန်ထပြီးကြောက်စရာမရှိနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူတိုင်းဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလိုပဲ NoFap ခရီးကိုပျော်မွေ့ပါစေ။
LINK - ကျွန်ုပ်၏ NoFap ခရီးစဉ် (အအောင်မြင်ဆုံးသူများမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စာဖတ်ရန်သင့်အချိန်ထိုက်တန်ပါသည်!)
@ အတွက်ယနေ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။နေပြည်တော် porn နဲ့သူ့ရဲ့ရုန်းကန်မှုများအကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်။ သူ့ပုံသက်သေကလူများစွာကိုပေးလိမ့်မယ်။ t.co/ixkKDoQMcC